Faculty & Staff Archives »Mahadum Hodges
Category: Ngalaba & Ndị ọrụ
Onye nzuko Mmekorita Onye Mmekorita nke Zamniak
Ekele maka ọnọdụ ọhụrụ ahụ, Michelle! Akpọrọ Michelle Zamniak aha Onye Mmekọrịta Mmepe Mmepe na Mahadum Hodges Na ọnọdụ mmepe mmekọrịta, Michelle Zamniak bụ ọrụ maka ịkwalite mmekọrịta obodo ugbu a na imepụta ndị ọhụụ maka mahadum. Ya na otutu ulo oru na aru oru na odida anyanwu Florida, tinyere ulo akwukwo di elu, ulo oru, ochichi [...]	GỤKWUO
Lujic Soro Mahadum Hodges dị ka AVP nke Ndenye aha
Nabata na Hodges U, Branislav! Branislav Lujic akpọrọ dị ka onye osote onye isi oche nke aha ntinye aha na ọnọdụ a, Branislav Lujic na-ahụ maka nnabata, mmetụta izizi, na otu ndị otu ụmụ akwụkwọ. Ọ ga-aga n'ihu n'ịkwalite mbanye na mgbasa ozi nke ụmụ akwụkwọ mba ụwa. Ọ na-eweta afọ 10 nke ọkachamara na ntinye akwụkwọ na nnabata. Tupu [...]	GỤKWUO
Nabata, Chris MacNeil
Nabata na Mahadum Hodges, Chris MacNeil! Chris MacNeil abanyela na Mahadum Hodges dị ka onye isi nchịkwa nnabata maka ogige Fort Myers. N'ebe a, ọ ga-elekọta ndị otu nnabata dabere na mahadum Fort Myers mahadum. Chris ga na-etolite ma na-azụkwa ndị nnọchi anya nnabata ahụ, na mgbakwunye na ebido ebumnuche ndebanye aha. Chris [...]	GỤKWUO
Arenas sonyeere Mahadum Hodges dị ka Onye Okike Kere Eke
Nabata na Mahadum Hodges, Santiago Arenas! Machị 12, 2019 –NAPLES / FORT MYERS, FLA - Santiago Arenas abanyela na Mahadum Hodges dị ka Onye Okike Kere Ọkachamara Ọdịmma Ahịa. N'ọnọdụ a, Santiago ga-ahụ maka ịmepụta akara ngosi na imepụta mahadum niile, na ilekwa anya maka imepụta na imepụta ngwa ahịa ahịa mahadum. Arenas ga-enyekwa aka [...]	GỤKWUO
Oghere ahia - #MyHodgesStory Otu Otu Prọfesọ si si na-etinye ego na Wall Street ka ọ na-etinye ego na klaasị Arnold Miyamoto enwetala ndụ n'akụkụ isi nke ụdịdị dị iche iche. Ka ọ mikpuru na ego Wall Street maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30, ọ na-achịkwa ndị 450 + n'otu oge n'ofe ụwa, na-arụ ọrụ maka ogwe akụ na-etinye ego na Bank [...]	GỤKWUO
Nabata Mmasị Mgbe Afọ Ndị A Niile
Nnabata Mmasị Mgbe Afọ Ndị A Nile gasị - Na-ewebata Dr. Dolores "Dee" Batiato Dr. Dolores "Dee" Batiato hụrụ klaasị n'anya, oke agụụ ya bụ ịkụziri, tinye ma gbaa ụmụ akwụkwọ ya ume. Dị ka prọfesọ na onye isi oche mmemme nke njikwa na Mahadum Hodges, ọ ghọtara ihe ọ ga-ewe iji mee ka ụmụ akwụkwọ bụrụ ndị ọkachamara nchịkwa wee gwa ha, "Ọ bụ [...]	GỤKWUO